आफ्ना आमाबुवाको टुटेको सम्बन्धबारे के भन्छिन् करिना कपुर ? – bampijhyala.com
Home > मनोरञ्जन > आफ्ना आमाबुवाको टुटेको सम्बन्धबारे के भन्छिन् करिना कपुर ?
१३ पुष २०७७, सोमबार ०९:५७ bampijhyala
बाँपीझ्याला, एजेन्सी । बलिउड अभिनेत्री करिना कपुरले बुवा रणधीर कपुर र आमा बबिता कपुरबीच बिग्रेको सम्बन्धबारे मिडियामा खुलेर बोलेकी छिन्। उनले हालै एक अन्तर्वार्तामा बुवा र आमाको सम्बन्ध टुटेपछि आफूलाई आमाले कसरी हुर्काइन् र बुबाले कसरी साथ दिइरहे भन्ने सार्वजनिक गरेकी हुन्।
कपुर खानदानका कलाकारका रूपमा चिनिने करिनाका बुबा र आमा रणधीर र बबिता दुवै बलिउड कलाकार हुन्। सन् १९७० दशकमा सक्रिय उनका ‘हात कि सफाइ’, ‘जवानी दिवानी’, ‘कसमे वादे’ लगायत दर्जनौं फिल्ममा अभिनय गरेका छन्।
रणधीर बलिउड फिल्म अभिनेतासँगै निर्देशक तथा निर्माता पनि हुन्। ‘फर्ज’, ‘हसिना मान जाएगी’, ‘वनफूल’ लगायत फिल्ममा काम गरेकी बबिता सन् १९६६ देखि १९७३ सम्म सक्रिय अभिनेत्री हुन्।
रणधीर कपुर र बबिताले ‘जीत’, ‘कल आज और कल’ जस्ता फिल्ममा सँगै काम गरेका छन‍्। ‘कल आज ‍और कल’ मा सहकार्य गर्ने क्रममा प्रेममा परेका यी दुईले सन् १९७१ नोभेम्बर ६ मा बिहे गरे। सन् १९७४ मा करिश्मा कपुर र सन् १९८० मा करिना कपुर जन्मिँदा पारिवारिक सम्बन्ध ठिकै थियो।
सन् १९८३ तिर आएर रणधीर र बबिताको सम्बन्धमा दरार आउन थाल्यो। दुई जना सन् १९८८ मा छुट्टिए पनि सम्बन्ध विच्छेद नै भने गरेनन्। दुवै जना आफू खुसी बस्न थाले। हिन्दुस्तान टाइम्सका अनुसार, सन् १९८८ मा रणधीर आफ्ना बुवाआमासँग बसाइँ सरे।
‘बबितालाई म निकै भयानक मान्छे लाग्न थाल्यो। म धेरै रक्सी पिउथेँ। अनि ढिलो घर जान्थेँ। यो कुरा उनलाई मन परेन। मलाई पनि उनले चाहेको जस्तो शैलीमा जीवन बिताउनु थिएन। हाम्रो प्रेम विवाह भए पनि उनले म जस्तो थिएँ, त्यस्तै स्वीकार्न सकिनन्,’ रणधीरले बबितासँग छुट्टिनुको कारण खुलाउँदै हिन्दुस्तान टाइम्सलाई भनेका थिए, ‘उसो भए ठिकै छ भन्ने भयो। अनि हामी छुट्टै बस्ने निश्कर्षमा पुग्यौं। हाम्री दुई छोरी छन् र उनीहरू आ-आफ्नो क्षेत्रमा उत्कृष्ट छन्। बुवाका रूपमा म योभन्दा बढी के नै खोज्छु होला?’
करिनाका अनुसार, रणधीर र बबिता (बुवा-आमा) को सम्बन्धबारे आफू र दिदी करिश्माले सानैदेखि बुझेका थिए। उनले अन्तर्वार्तामा कसरी बुवा रणधीरले ‘चुपचाप’ दुई छोरीको राम्रो भविष्यबारे ख्याल राखेका थिए भन्ने बताएकी छन्। आमाबुवा छुट्टिए पनि सँगै हुनु पर्ने ठाउँ र अवस्थामा कसरी उनीहरू सँगै उपस्थित भए भन्ने कुरा पनि करिनाले खुलाएकी छन्।
उनले मोजो स्टोरीलाई भनेकी छन्, ‘मेरी आमा मेरो सबैभन्दा मिल्ने साथी हुनुहुन्छ। उहाँलाई सम्मान गर्छु अनि धेरै माया पनि। उहाँ हामीसँग प्रत्यक्ष रुपमा धेरै बोल्नु हुँदैन तर पछाडि बसेर हामीलाई सधैं हेरिरहनु हुन्छ। उहाँले बढी ध्यान खोज्नुहुन्न। तर चुपचाप बसेर जहिले पनि हाम्रो भलो चाहनुहुन्छ। हाम्रो लागि उहाँ सधैं सँगै हुनुहुन्छ।’
‘मेरा आमा-बुवाको सम्बन्ध राम्रो छ। कहिलेकाहीँ सँगै भएका दुई व्यक्तिलाई आफ्नो योजना अनुरुप जिन्दगी चलिरहेको छैन भन्ने महसुस हुन्छ। यस्तोमा सँगै हुनुभन्दा नहुनु जाति होला भन्ने लाग्न सक्छ। त्यसैले दुई जना छुट्टिन पुग्छन्,’ करिनाले थप भनेकी छन्, ‘छुट्टिएपछि पनि उनीहरू साथी त हुन सक्छन् नि! आफ्नो बच्चाहरूको भविष्यबारे निर्णय लिन सक्छन्। यसका लागि उनीहरू २४ सै घण्टा सँगै हुनुपर्छ भन्ने जरुरी छैन। मेरो बुवा आमाको पनि यस्तै कथा हो।’
‘यस प्रकारको सम्बन्ध हुन सम्भव छ भन्ने हामीले बुझेका थियौं,’ करिनाले भनेकी छन्, ‘मेरो आमा बुवा छुट्टिनु भएको ३५ वर्ष भयो। तर जब सँगै हुनुपर्ने स्थिति आउँछ, उहाँहरू सँगै हुन तयार हुनुहुन्छ। उहाँहरू आफ्नो दैनिकीमा छुट्टिनु हुन्छ भने त्यो ठिकै छ।’
प्रदेश सरकारले बजेट सार्वजनिक गर्दै १३ पुष २०७७, सोमबार ०९:५७
अर्जेन्टिना र चिलीले बराबरी १३ पुष २०७७, सोमबार ०९:५७
विद्यालय तहको नयाँ शैक्षिक सत्र आजदेखि शुरु १३ पुष २०७७, सोमबार ०९:५७
काठमाडौं उपत्यकामा आजदेखि निषेधाज्ञा कति खुकुलो ? कति कराई ? १३ पुष २०७७, सोमबार ०९:५७
हजुरको आजको दिन, ०७८ असार १ गते, मंगलवार, १५ जुन २०२१। १३ पुष २०७७, सोमबार ०९:५७